September 22, 2018 ६ आश्विन २०७५
यो चुनावमा ‘असल ब्यक्ति’ चुन्ने कि ‘सहि उद्धेश्य’ बोकेको दल ?
Monday, 13 Nov, 2017 1:35 AM
नेपालको संबिधान २०७२ अनुरुप देशमा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने संघारमा हामी आईपुगका छौं । अबको १ महिना
भित्रैमा देशमा प्रतिनिधिसभाका २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) जना र विभिन्न प्रदेश सभाका ५५० (प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२०) सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका हुनेछन् । त्यसैले अहिले चुनाबमा कुन पक्षलाई केका लागि भोट दिने भन्ने बारेमा बिभिन्न बहसहरू भइरहेका छन् ।
२०४६ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको स्थापना पश्चात नेपाली जनताले चुनेका दल र तिनका प्रतिनिधिहरूले जन–अपेक्षा अनुरुप काम गरी देशलाई उन्नति–प्रगतिको बाटोतर्फ डोर्याउलान् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, चूनाब जितिसकेपछि आ–आफ्नै दलीय र गुटगत स्वार्थमा रुमलिन पुगेका दल र तिनका प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षाको कदर गर्नु त परै जाओस्, देशको स्वार्थ भन्दा बढि दलीय र ब्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिनपुगे र देश दीर्घकालीन अस्थिरताको भूमरीमा धकेलियो ।
पञ्चायतको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेसले २०४८ र २०५६ सालमा गरि दुईपल्ट स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनायो । तर दुवै अवसरहरूमा कांग्रेस देशप्रति गम्भीर हुन सकेन, बहुमतको सदुपयोग गर्न सकेन । फलतः कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरू कांग्रेसले नै गिराउन पुग्यो । बीचमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिनाको सरकारले छोटो कार्यकालमा जनतामा दीर्घकालीन छाप छाड्नेगरि जनकल्याणकारी र जनसहभागितात्मक बिकासका कार्यक्रमहरू ल्याउन सफल त भयो, तर त्यसबाट अताल्लिएको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन दरबार र भारतीय शक्तिहरू समेतको इसारामा त्यस्तो लोकप्रिय सरकारलाई ९ महिना भन्दा बढी टिक्न दिएन । यसरी आफू पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्ने र गर्न खोज्ने अरूलाई पनि टिक्न नदिने कांग्रेसको रबैयाले राजनैतिक अस्थिरता मात्रै सिर्जना गर्यो । त्यस्तो राजनैतिक अस्थिरताले समाजमा असन्तोष बढ्यो, र त्यही असन्तोषको मलजलमा १७००० जनताको ज्यान जाने गरि हिंसात्मक आन्दोलन भयो । हिसात्मक आन्दोलले जनतामा ल्याएको बिभाजनबाट फाइदा लिइ निरंकुशता लाद्न खोज्दा राजतन्त्रको समेत अन्त्य हुन पुग्यो ।
यसरी देशमा अप्रत्यक्ष रुपमा अस्थिरताको खेती गर्ने एउटा देशभित्रको (दरबारीया) शक्ति त सकियो । तर नेपालमा अस्थिरता कायम राख्नसके त्यसबाट अनेकन रणनैतिक फाइदाहरू लिन सकिन्छ भनेर भारतले नग्न हत्कण्डाहरू अपनाईरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । र नेपाली कांग्रेस भारतका त्यस्ता षडयन्त्रकारी हतकण्डाहरूको भरीया बनेर हिंडिरहेको पनि जगजाहेर नै छ । यसरी नेपालमा अस्थिरता कायम राख्न कम्मर कसेर लागेका दुईवटा शक्ति अहिले बाँकी छन्– एउटा भारत र अर्को नेपाली कांग्रेस । त्यसैले यो चूनाबले नेपालमा अस्थिरता चाहने यी दुई शक्तिहरूलाई ठेगान लगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले धेरै हदसम्म अबको नेपालको भबिष्य निर्धारण गर्नेछ ।
२०४६ साल पश्चात हालसम्मको करिब २८ वर्षको बीचमा देशमा २६ पल्ट सरकार फेरिएछन् । एउटा सरकार करिब १ बर्ष भन्दा बढी चलेनछ । यस्तो चरम अस्थिरताले सिर्जना गर्ने भनेकै बिसंगति हो । अस्थिरताको अन्त्य नगरुन्जेल बिसंगति मौलाइरहन्छ, र बिसंगतिको अन्त्य नगरुन्जेल विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै अस्थिरता हो भन्दा फरक पर्दैन ।
यो निर्वाचनले अस्थिरतालाई उन्मुलन गर्ने ताकत आफूमा छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न नेपाली जनतालाई ठूलो अवसर दिएको छ । जनताले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्दा मात्र देशले विकासको बाटोमा फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको चुनाबमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका दुई गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा छन् । बहुदल आएदेखिका हरेक अवधीमा कांग्रेसले देशमा अस्थिरतालाई मात्रै प्रश्रय दियो । संविधान बनाए पश्चात् देखाएका ब्यबहार हेर्दा त झन् नेपाली कांग्रेस हो कि भारतीय कांग्रेस हो छुट्याउन समेत मुस्किल छ । भारतको हतियार बनेर कांग्रेसले यो बीचमा जे जे गर्यो, त्यसले इतिहासबाट प्राप्त बचेखुचेको आफ्नै साख र इज्जतमा समेत कलंकको कालो पोत्यो । त्यो कलंकको कालो टीका कांग्रेसको निधारबाट हत्तपत्त मेटिन मुस्किलै छ ।
अहिले कांग्रेसको राजनीति हरेक कोणवाट भारतले नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । कांग्रेसमा रहेका तुलनात्मक रुपमा इमान्दार धनराज गुरुङहरू टेलिभिजनको पर्दामा त्यतिकै धरधरी रोएका होइनन् । त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्याउनु भनेको परोक्ष रुपमा भारतलाई सत्तामा पुर्याउनु हो, अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनु हो, र देशको दुर्भाग्यलाई निमन्त्रणा गर्नु हो ।
अर्को तर्फ केपी ओली र एमालेले नेतृत्व गरेको बाम गठबन्धन ५ बर्ष टिक्ने सरकार बनाउने दृढताका साथ मैदानमा आएको छ । केपी ओलीले जम्मा जम्मी ९ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा भारतीय नाकाबन्दीको बिरुद्धमा नेपालीहरूलाई एकजुटमात्र बनाएनन्, चीनसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेर नेपालमाथि भारतीय शासकहरूको ब्लाकमेलिङ गर्ने हैसियत माथि कठोर प्रहार पनि गरिदिए । नेपालले पटक पटक भोगेका नाकाबन्दीमा अनुभुत गरिएको आवश्यकता भनेकै चीनसँग नेपालको पाराबहन सन्धी थियो । त्यो सन्धी गर्ने आँट ओलीले देखाए । उनको सरकार केही महिना टिकेको भए विश्वकै सर्बसक्तिमान नेता चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्ने थिए, र सो भ्रमणका दौरान नेपाल–चीन सहकार्यका अनेक पाटाहरू ब्यबहारमा उत्रने थिए । भारतप्रति नेपालको परनिर्भरता तोडिने थियो । त्यही देखेरै भारतीय योजनाका साथ ओलीलाई रातारात सत्ताबाट हटाईयो । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हतियार र मतियारको रुपमा प्रयोग भए ।
त्यस घटनाबाट अझ ऊर्जा प्राप्त गरेरै केपी ओलीले माओवादीलाई समेत विश्वासमा लिएर अहिले एउटै गठबन्धन र एउटै पार्टी बनाउने अठोट गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठीन छैन । यो गठबन्धन मार्फत बहुमत ल्याएर ५ बर्ष देशको नेतृत्व गरी देशलाई विदेशी (मुख्यतया भारतीय) पञ्जाबाट सधैंका लागि मुक्त गर्नु केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनको मूल उद्धेश्य रहेको उनका बोली र ब्यवहारहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।
अस्तिसम्म कांग्रेसकै पछि पछि लागेर, भारतीयहरुकै उक्साहटमा हिंड्ने माओवादीहरूलाई साथमा लिएर केपी ओली स्थिरता दिन सक्षम नहुने हुन् कि भन्ने केही मानिसहरूको संसय छ, जुन धेरै हदसम्म जायज पनि हो । तर माओबादीलाई माओबादी नै रहन दिंदा त्यो दल ‘न वल्लो तीर, न पल्लो घाट’ जस्तो अस्थिर शक्तिको रुपमा मात्रै रहने भयो, जसले गर्दा अरूले उसलाई सधैं दुरुपयोग मात्र गरिरहन पाउने भए । त्यही देखेर नै माओबादीलाई पहिले एमालेसँग गठबन्धनमा ल्याएर र अलि पछि दुई दलको एकता नै गरेर माओबादीमार्फत भविष्यमा कसैले पनि अस्थिरताको खेती गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बाटोमा केपी ओली र प्रचण्ड लागेका देखिन्छन् । त्यसैले स्थिरता चाहने नेपालीहरूले यी दुई दल मिलुन् र देशलाई विकासको बाटोमा हिंडाउन् भनेर दवाव दिइराख्नु जरुरी छ ।
केही मानिसहरूले ‘ब्यक्ति हेरेर भोट हालौं, जुन दलका भए पनि राम्रा मान्छे जिताउँ’ भन्ने गरेको पनि कताकति देखिन्छ । सुन्दा र देख्दा यस्तो सोचाई निकै राम्रो र निकै विवेकशील सुनिन्छ, देखिन्छ पनि । तर हामीले अपनाएको राजनैतिक ब्यबस्थाको आलोकमा दाँजेर हेर्दा यस्तो सोचाईले जानी नजानी अस्थिरतालाई नै प्रश्रय दिन्छ ।
हामीले अपनाएको प्रणाली दलीय प्रणाली हो, निर्दलीय होईन । निर्दलीय प्रणाली भएको भए ब्यक्ति हेरेरै भोट हाल्नु पथ्र्यो । तर बहुदलीय प्रणालीमा उम्मेदवार ब्यक्ति भन्दा पनि बढी त्यो ब्यक्ति आवद्ध दललाई हेरेर भोट हाल्नु पर्ने हुन्छ ।
उदाहरणको रुपमा हेरौं न, मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीले नेतृत्व गरेका सरकारहरूले देशको अहित गर्ने कुनै काम गरेका भएर उनीहरूलाई हटाईएको थिएन, बरू उनीहरूले नेपालको हित गरिराखेको देख्न नसक्ने भारतको इसारामा कांग्रेस र अरू दलहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हटाईएको थियो । त्यसो भए त्यो बेला कांग्रेसमा असल सांसद एउटा पनि थिएनन् त ? थिए होलान् नि ! निकै असल भनेर गुणगान गाइएका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, र विद्वान भनेर चिनिन चाहने डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. महत (दाजुभाई) जस्ता कांग्रेसका सांसदहरूले ‘यी सरकारहरूले देशको अहित गरेका छैनन्, हामी यी सरकार ढाल्न प्रयोग हुदैनौं भनेनन् नि ! किनकि दलीय प्रणालीमा त्यसो गर्न सकिंदैन । आफू जति नै ‘असल’ र ‘विद्वान’ भए पनि सत्ताको नशामा मदहोस कांग्रेसी नेताहरूको स्वार्थपूर्ण निर्णयको पछि पछि असल र विद्वान भनिएका मानिसहरू पनि लुरु लुरु हिडेको त सत्य हो नि !
त्यसैले बहुदलीयता स्वीकार्ने र देशको राजनैतिक स्थिरता चाहने मतदाताले दलले देखाएको ब्यबहार, लिएको नीति र त्यो दललाई नेतृत्व वा संचालन गर्ने मुख्य नेताको लक्षण र ब्यबहार हेरेर भोट हाल्नु पर्ने हुन्छ ।
केही मानिसहरूले विवेकशील दललाई विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर विवेकशीलका दुई चार जनालाई जिताउँदा त्यसबाट नेपालले स्थिरता पाउँदैन । उनीहरूले कल्पना गरेकै रफ्तारमा फस्टाउदै गए भने पनि देशको राजनैतिक स्थिरतामा नियन्त्रण गर्नसक्ने साईजमा पुग्न विवेकशील दललाई कम्तिमा अरू १५–२० बर्ष लाग्छ । १५–२० बर्ष पछि के गर्ने, त्यो त्यतिबेलै सोचौंला । तर विवेकशीलका लागि देश अरू दुई दशक अस्थिरै रहोस् भन्न अहिले सकिंदैन । त्यसैले विवेकशील दललाई भोट दिने निर्णय गर्नुअघि पनि त्यस्तो निर्णयले अहिलेको परिस्थितिमा स्थिरता प्रतिको नेपाली चाहानालाई प्रतिकूल असर पो पुर्याउछ कि भनेर सोच्नु जरुरी छ ।
हामी नेपालीले अस्थिरता र हीनताबोधका अनेक बर्ष गुजार्यौं । ती बर्षहरूमा हामीले स्थिरता दिन सक्ने र देशको शीर उचो राख्न सक्ने नेताको कामना पनि सदैव गरिरह्यौं । हाम्रै अगाडि राजनीतिमा अनेक नेताहरू उदाए र अस्ताए । अहिले हाम्रासामु बिद्यमान नेताहरूमध्ये केपी ओली यस्ता नेताको रुपमा देखिएका छन् जसले अप्ठेरो भन्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि देशको सर्वाङ्गिण स्वार्थलाई आफ्नो निजी स्वार्थ भन्दा माथि राख्न सकेका छन् । संविधान निर्माणका बेला देशलाई जातीय–क्षेत्रीय द्वन्दमा लैजान नदिनका लागि उनले देखाएको दृढता, नाकाबन्दीताका उनले प्रस्तुत गरेको आंट र अठोट, या पछिल्लो समयमा देशमा रहेको राजनैतिक अस्थिरतालाई तोड्नका निम्ति उनले लिएको अग्रसरता, यी सबै कुराहरूमा उनले देशको दीर्घकालीन हीतलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।
एउटा ‘साँप र भर्याङ’ (लुंडो पनि भनिने) नामको खेल हुन्छ । त्यस खेललाई नागपास पनि भनिन्छ । त्यस खेलमा भर्याङ चढ्दै, र साँपले निल्दै गोटी १०० मा पुर्याउनेले खेल जित्छ । तर ९८ र १०० को बीचमा एउटा लामो साँप हुन्छ, जसले गोटी निल्यो भने झरेर ४ तिर पुग्छ । त्यहाँबाट पूनः १०० मा पुग्न लामो समय लाग्छ, त्यो बेला अर्कैले खेल जितिसकेको हुन्छ ।
नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई त्यही ‘साँप र भर्याङ’ खेलसँग तुलना गर्ने हो भने सफलताका अनेक भर्याङ चढ्दै र असफलताका अनेक साँपहरूबाट निलिदै एमाले र केपी ओलीले चालेको त्यो दीर्घकालीन देश–हीतको गोटी अहिले ९८ मा पुगेको छ । देशका लागि दीर्घकालीन खेल जित्न केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन अब एक चाल मात्र टाढा छ । अब ९८ मा पुगेको गोटी साँपलाई खुवाएर ४ मा पुर्याई अस्थिर राजनीतिलाई जित्न दिने कि १०० मा पुर्याएर स्थिरतालाई जित्न दिने, त्यो निर्णय हामीले गर्ने बेला आएको छ । हामीले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई मत दिएर बल दियौं भने त्यस गठबन्धनले देशहीतको यो दीर्घकालीन खेल जित्न सक्ने स्पष्ट लक्षणहरू अहिले देखिएका छन् ।
बिपक्षीहरू (विवेकशील साझा समेत) केपी ओली गठबन्धनले चालेको गोटीलाई साँपले निले निलोस् भन्छन् । विवेकशील साझा दललाई सकारात्मक रुपले नै हेर्दा पनि उनीहरु १०० का नजिकतिर भएदेखि लौ त, उनीहरू अगाडि बढ्लान् भन्न सकिन्थ्यो । तर उनीहरुको गोटी त जन्मेको पनि छैन । त्यसैले ओली गठबन्धन्ले चालेको गोटीलाई साँपले निल्दा अघि बढ्ने कांग्रेस हो, जसको लागि डाइस भारतले हल्लाएको छ । त्यसकारण कांग्रेसले जित्दा नेपालले जित्दैन, भारतले जित्छ । यो चुनाबमा प्रयोग हुने हाम्रो मतको ठूलो र दीर्घकालीन महत्व छ । हाम्रो मतले कांग्रेसले जित्दा उ मार्फत भारतले जित्छ । हाम्रो मतले बामगठबन्धनले जित्दा नेपालले जित्छ, नेपालीहरूको स्थिरताको चाहानाले जित्छ ।
त्यसैले स्थिरता, विकास, देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान चाहने हरेक मतदाताले अन्य सबै भावनात्मक कुराहरूलाई एकछिन थाती राखेर केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बाम गठबन्धनका उँमेदवारलाई मत दिनु जरूरी देखिन्छ । त्यसो गर्दा मात्र देशले स्थिरता प्राप्त गर्छ, र हाम्रा सन्ततीहरूले स्वाभीमानका साथ आफ्नो देशको गौरब महसुस गर्न पाउने छन् । अहिले हामीले असाबधानीका साथ हाम्रो भोट गलत ठाउमा हाल्यौं भने ‘स्थिरताको संघारमा पुगेर पनि त्यसलाई आत्मसात गर्न नसक्ने कमजोर नागरिक’को रुपमा हामीले आफैंलाई धिक्कार्नु पर्ने हुनसक्छ । आसा गरौं त्यस्तो हुने छैन । र संकल्प गरौं– बाम गठबन्धन मार्फत देशमा स्थिरता पाउन सक्नेगरि हाम्रो भोटको प्रयोग हुनेछ ।
प्रतिरोध गर, प्रिय मानिसहरू, तिनीहरूको प्रतिरोध गर यही जेरुसेलममा मेरो घाउ सफा गरेर दुःखको सास फेरेको हुँ र, मेरो आत्मालाई हत्केलामा बोकेर हिँडेको हुँ
सेक्स सम्बन्धी अनौठा तथ्यहरु, एकै दिनमा १२ करोड पटक सेक्स
राशि अनुसारको प्रेम सम्बन्ध
१. मेष राशि: यो राशिका मानिसहरु प्रेममा निकै समर्पित हुन्छन् र प्रेमबिना मानसिक र सारीरिक रुपमा निकै कमजोर सावित हुन्छन्
चितवनको माडीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खुल्यो
रत्ननगर, ३० भदौ - दक्षिण चितवनको माडीमा पहिलो बहुप्राविधिक शिक्षालय खुलेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सिटीइभिटी) ले माडीको हरिनगरमा ‘दिवाकर स्मृति बहु¬प्राविधिक शिक्षालय’ सञ्चालन गरेको हो ।
रुपन्देही, ५ असोज- पाल्पा र रुपन्देही जिल्लाको सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक नुवाकोटगढी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकाशित हुन थालेको छ । बुटवलको अत्याधिक गर्मी वा जाडो मौसम छल्न नुवाकोटको मौसम अनुकूल भएकाले पनि सो क्षेत्रमा पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
दोलखा, ३ असोज – भीमेश्वर नगरपालिका–४ दुंगलस्थित चम्पुजा डाँडा पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ ।
हिलिहाङ, पाँचथर, ३ असोज- धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको रूपमा परिचित लब्रेकुटी प्रचार–प्रसारको अभावमा ओझेल परेको छ । फिदिम नगरपालिका वडा नं ५ र ३ को सङ्गमस्थलमा अवस्थित यो ठाउँको प्रचार एवं पूर्वाधार तयार गरी पर्यटकीय गन्तब्य बनाउनुपर्ने वडा –३ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र गुरुङ बताउनुहुन्छ ।